ဖုယွင် အထည်ချုပ်သပိတ် အစိုးရအမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် လုပ်သား ၅ဝ ကျော် ရန်ကုန်မြို့လယ်၌ ဆန္ဒ? - Yangon Media Group
ဖုယွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေစဉ်။(ဓာတ်ပုံ-MPA)
ဖုယွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားသပိတ်ကို အစိုးရ အမြန်ဆုံးဖြေ ရှင်းပေးရန် စက်ရုံရှေ့ဆန္ဒပြလုပ်သားများထဲမှ လုပ်သား ၅ဝ ကျော် ရန်ကုန်မြို့လယ်၌ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အယောက် ၃ဝ ကျော်ကို အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်ထုတ်ပယ်ရာမှအစပြုပြီး အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံလုပ်သားများ အလုပ်ပြန်လည်ခန့် အပ်ပေးရေးအတွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း စက်မှုဇုန်(၁)ရှိ ဖုယွင်အထည်ချုပ် စက်ရုံမှ ကုန်ထုတ်လုပ်သား ၂ဝဝ ကျော်သည် လုပ်ငန်းခွင်ရပ်ဆိုင်းပြီး စက်ရုံရှေ့ ဆန္ဒပြလျက်ရှိသည်မှာ ရက်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ခန့် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိခဲ့ကြောင်း။ ထို့ကြောင့် အစိုးရမှ အမြန်ဆုံးလာရောက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန် ဆန္ဒပြလုပ်သားတွေထဲမှ ၅ဝ ကျော်ခန့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားအနီးမှ လသာမြို့နယ်အထိ လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလုပ်သားများထံမှ သိရသည်။
ဖုယွင်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားသပိတ်အား အစိုးရမှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရေး၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ ဖြိုခွဲခံရမှုကို အစိုးရမှ အရေးယူပေးရေး၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဖြေရှင်းပေးရေး စသည့် တောင်းဆိုချက်များဖြင့် ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်မတို့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် EC ခုနစ်ယောက်အပါအဝင် စုစုပေါင်းသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အယောက် ၃ဝ ကျော်ကို အကြောင်းမဲ့ အလုပ်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကို အစိုးရက ဘယ်လိုအရေးယူ ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ သိချင်တယ်”ဟု ဖုယွင် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် မသက်ထားဆွေက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းမှု ကြန့်ကြာနေသည့်အတွက် ဆန္ဒပြလုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ဖုယွင်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားပေါင်း ၉ဝဝ ခန့်ရှိပြီး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြရာတွင် မပါဝင်သည့် အလုပ်သမား ၆ဝဝ ကျော်သည် စက်ရုံဝင်ထွက်ပေါက်တံခါးကို ပိတ်ပြီး ဆန္ဒပြနေသည့် အလုပ်သမားများကြောင့် အလုပ်ဆင်းရန် အုတ်နံရံကို အပေါက်ဖောက်ပြီး အဝင်အထွက်လုပ်နေရကြောင်း သိရသည်။
ရေလှောင်တမံများတွင် ယခုနှစ်မိုးရာသီ၌ ရေဝင်ရောက်မှု နည်းပါး
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သန်လျင်တပ်နယ်၌ ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ?
ပခုက္ကူမြို့တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်း လာကြည့်သူနှစ်ဦး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး
မန္တလေးတွင် ပထမအကြိမ် အမျိုးသမီး လမ်းလျှောက်ပွဲတော် အမျိုးသမီး ၁ဝဝဝ ကျော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ